ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲနှင့်ကျောက်မျက် Pendant: ပရီမီယံစုဆောင်းခြင်း
ငွေကြေး Pick EUR USD GBP AUD CAD DKK JPY HKD SGD NZD
အရည်အသွေး Simulated မြ
အရည်အသွေး Simulated စိန်
1 Carat စေ့စပ်လက်စွပ်အရည်အသွေး
Sky Blue ဥဿဖရား
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 269 ရောင်းဈေး € 139
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 199 ရောင်းဈေး € 139
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 179 ရောင်းဈေး € 129
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 229 ရောင်းဈေး € 149
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 239 ရောင်းဈေး € 159
အပြာရောင် Topaz လည်ဆွဲ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 179 ရောင်းဈေး € 99
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 249 ရောင်းဈေး € 179
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 179 ရောင်းဈေး € 119
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 219 ရောင်းဈေး € 149
မြ Pendant လည်ဆွဲ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 209 ရောင်းဈေး € 149
ကျောက်မျက်ရတနာများ ပတ္တမြား၊ Sapphire၊ စိန်၊ မြ၊ Topaz & ပုလဲလည်ဆွဲများ
သင်တစ်နေရာရာသို့သွားသည့်အခါလူအုပ်ထဲမှထွက်သွားရန်သင်ရှာနေပါကသင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်မှန်ကန်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲများသည်သင့်ကိုလူစုလူဝေးထဲမှထင်ရှားစေပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်လက္ခဏာများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုသင်တစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ Pendant များသည်အမြင်အာရုံဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးသင်စားပွဲသို့ယူဆောင်လာသည့်အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကိုသင်သဘောကျမည်။ ဒီနေရာတွင် Pure Gems တွင်မည်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ဆိုသည့်ဥပမာတစ်ခုရှိသည်။ အဓိကအာရုံစိုက်ရမည့်အချက်မှာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတန်ဖိုးရှိသောကျောက်မျက်ရတနာများကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုထားသောအဖိုးတန်သောဖျာသည် ၉၂.၅% ဒဏ်ငွေရှိပြီး၎င်းအားလိုချင်သောကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်နေရာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အံ့ experience စရာကောင်းသည့်အတွေ့အကြုံနှင့်အချိန်တိုင်းငွေအတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးတစ်ခုရရှိစေသည်။ သင်ပြုလုပ်သမျှသည်၎င်းကိုစမ်းကြည့်ရန်ဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်နှင့်အမြင်အာရုံအထင်ကြီးစေရန်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်စမ်းကြည့်ရုံမျှဖြင့်အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေအတွေ့အကြုံများထွန်းလင်းလိမ့်မည်။
သန့်စင်သောကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာ ၇ မျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ မြများမှာများသောအားဖြင့်စိမ်းလန်းသောရောင်စုံသောဘာရီအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ကဗန်နာဒီယမ်နှင့်ခရိုမီယမ်ရှိသည်။ သူတို့မှာကြီးသောကြိုးများရှိပြီးများသောအားဖြင့်မြ Gemstone Necklaces ကိုအလွန်ကြာရှည်ခံစေသည်။ အလယ်အလတ်နှင့်ပိုမိုမှောင်မိုက်သည့်လေသံဖြင့်ရရှိသောကျောက်မျက်များကိုမြမြအဖြစ်မြင်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူးဖော်မည့်မြများအစားအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအဆင့်အတန်းတင်မြမြများကိုအသုံးပြုသည်။ ပုလဲများသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးအလွန်အစွမ်းထက်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအမြင်အာရုံအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့လူသိများပြီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့ပါလာတတ်တယ်။ အဲဒါကသူတို့ကိုစျေးကွက်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာတွေအဖြစ်ထင်ရှားစေတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ပုလဲဟာပတ်ပတ်လည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့ဖန်တီးပုံကြောင့်အချို့သူတို့မှာထူးခြားသောပုံစံတစ်မျိုးရှိသည်။
ပတ္တမြားသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာ၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပတ္တမြားသည်သွေးနီဥရှိသည့်အတွက်လူသိများသည်။ သူတို့ကရှင်းလင်းပြတ်သား, ဖြတ်, အရောင်နှင့်ကာရက်အလေးချိန်အပေါ်အခြေခံပြီးအရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးပတ္တမြားကိုခိုသွေးဟုခေါ်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးများကြောင့်ကြီးမားသောပရီမီယံကိုပေးသည်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သော Gemstone လည်ဆွဲများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Sapphire Necklaces, Topaz Necklaces နှင့် Simulated Diamond Necklaces များအပြင် citrine နှင့်လည်ဆွဲများကိုလည်းပေးသည်။ သင်ပုံမှန်ကျောက်မျက်ရတနာဆွဲအား (သို့) Gရာမကျောက်မျက်ကျောက်မျက်များလိုချင်သည်ဖြစ်စေ Pure Gems သည်ဤနေရာတွင်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ဆွဲကြိုးအားလုံးသည်ကွင်းဆက်တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးလည်ဆွဲများကိုလည်းအပြည့်အဝလုပ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါကျောက်မျက်ရတနာများကဲ့သို့အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးလည်ဆွဲအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကယခုကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်းမပြုပါနှင့်ယနေ့သင်နှင့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ထိပ်တန်းကျောက်မျက်ရတနာ ၇ မျိုးစလုံးနှင့်အတူ Gemstone Necklaces များအားလုံးကိုကြည့်ရန်အထက်သို့တက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Read ဘ‌‌လော့ခ် ကျောက်မျက်ရတနာ၊ စိန်နှင့်ပုလဲလည်ဆွဲများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။ အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာပါ စိန်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာသန့်ရှင်းရေး အသက်ရှင်လျက်ကြောင်း sparkle ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ငါတို့ရှာဖွေပါ ပုလဲဆွဲကြိုးလည်ဆွဲ, ဒီဇိုင်းများနှင့်စျေးဝယ်အကွံဉာဏျနှင့်အကြောင်းကိုမေ့လျော့မ ပုလဲလည်ဆွဲစျေး။ နောက်ဆုံးသင့်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ ကျောက်မျက်နှင့်အတူလည်ဆွဲ မည်သည့်လသည်အဘယ်မွေးဖွားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
description: ဒီတော်ဝင်အမျိုးသမီးပုလဲလည်ဆွဲကရတနာရတနာ ၇၅ လုံးအထိရေတွက်သည်။ ၇-၉ မီလီမီတာအရွယ်ပုလဲများကိုအလွန်ခိုင်ခံ့သောကြိုးဖြင့်ကိုင်ထားသည်။ ဤလှပသောပုလဲများ၏ဘဲဥပုံ၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်ဆင်စွယ်ဖြူရောင်အားလုံးသည်သဘာဝပင်။ ဤပုလဲမင်္ဂလာဆောင်လည်ဆွဲသည်သတို့သမီးနှင့်မင်းသမီးအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ရတနာပစ္စည်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသည်။ ဒီလည်ဆွဲဟာဇိမ်ကျသောလက်ဖြူပွင့်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖဲကြိုးဖြင့်ထုပ်ထားသည်။
စစ်မှန်သောပုလဲ: ဤစစ်မှန်သောပုလဲများသည်ရေချိုအိုင် mussels တွင်မွေးမြူထားသောတကယ့်အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲများ၊ ၄ င်းတို့သည်သဘာဝအရောင်၊ တောက်ပ။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး ၁၀၀% သန့်စင်သည်။ ပုလဲ၏မိခင်သာလျှင် ၄ င်း၏ဗဟိုတွင်အခြားပစ္စည်း (shell bead nucleus) မရှိသောကြောင့်သာပါဝင်သည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသောအမျိုးသမီးပုလဲလည်ဆွဲသည်ကျွမ်းကျင်သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေရောင် ၉၂၅ ဒေါ်လာနှင့်ငွေတောက်ပသောငွေသည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့သော: ဤပုလဲတိုင်းလမ်းအတွက်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ပါ၏ အရောင်၊ တောက်ပမှုနှင့်မျက်နှာပြင်များအပြင်၎င်းတို့သည် 100% ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းမှုအပြင် ဤပုလဲမင်္ဂလာဆောင်လည်ဆွဲအတွင်းရှိပုလဲများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရ၊
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ လက်ခံရရှိရန်ယခုအမျိုးသမီးပုလဲလည်ဆွဲမှာယူပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်လာသည့်ကာလ။ "ယခုဝယ်ယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။
ဤပုလဲရီးရဲလ်စစ်မှန်ပုလဲဖြစ်ကြသည်။ Pure Gems တွင်ရောင်းချသည့်ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာများအားလုံးကို Real အရည်အသွေးဖြင့် ၁၀၀% သန့်စင်သောပုလဲဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရောင်းချသောပုလဲအားလုံးနီးပါး (၉၅%) သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိပုလဲမွေးမြူရေးခြံများမှမွေးရာပါရေချိုပုလဲများဖြစ်ကြသည်။ ဤစိုက်ပျိုးရေချိုပုလဲများသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည် အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲ ကြောင်း Mussels ၏ခွံအတွင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အလှူရှင် mussel ၏အတွင်းပိုင်းနံရံမှစပါးရိတ်သိမ်းသော mussel ထဲသို့ ၁ ပေမှ ၁ မီလီမီတာရှိသော mantle တစ်ရှူးအသေးငယ်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ပုလဲကိုစတင်ဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါအပိုင်းအစသည် mussel ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ပုလဲဖြစ်လာသည်အထိ Nacre (ပုလဲအမေ) နှင့်တဖြည်းဖြည်းဝန်းရံလိုက်ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲများကိုအပြည့်အဝမဖွဲ့စည်းမီနှစ်ပေါင်းများစွာအထိကြာနိုင်သည်။
ပုလဲမွေးမြူစဉ်ရေချိုရေကန်များရှိရေအောက်ပုလဲမွေးမြူရေးခြံများတွင် mussels များကိုကာကွယ်ထားသည်။ mussels သည် nacre နှင့်အတူပုလဲများကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးသောအခါပုလဲများကိုလက်ဖြင့်ရိတ်သိမ်းပြီးအရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ အရည်အသွေး၊ တောက်ပမှုနှင့်အရောင်တို့ဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ ဤအပုလဲ၏ 98% roundုံပတ်ပတ်လည်ကြသည်မဟုတ်။ ရေချိုပုလဲအများစုသည်ဘဲဥပုံနှင့်ခလုတ်ပုံသဏ္areာန်တူတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်ပုလဲများလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အရည်အသွေးမြင့်နှင့်တောက်ပမှုဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောအကောင်းဆုံးပုလဲများကိုသာအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းသောပုလဲများ၏အရောင်များ ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်တို့၏အရိပ်များဖြစ်သည်။ ပုလဲရဲ့လှပတဲ့အရောင်ကသဘာဝပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်ပုလဲတစ်စုံတစ်ရာသည်ဆိုးဆေး၊ အရောင်တူပုလဲများကိုလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အတူတကွယှဉ်တွဲအသုံးပြုကြသည်။
ရေချိုပုလဲ 100% သန့်စင်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ mussel ထဲသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်အပိုင်းအစ, ထို့နောက်တူညီသောပုလဲပစ္စည်း (nacre) နဲ့ mussel ကဝိုင်းရံထားတဲ့ mussel ရဲ့အတွင်းပိုင်း shell ကိုနံရံကနေပုလဲပစ္စည်းအပိုင်းအစဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဗဟိုတွင်အခြားပစ္စည်း (shell bead nucleus) မရှိပါ။ ၁၀၀% သန့်စင်သောပုလဲဖြစ်သည်။
✅မြန်မြန်၊ အခမဲ့ & လုံခြုံသောကမ္ဘာချီပေးပို့မှု
🇬🇧ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း - ယူကေသို့တင်ပို့သည် 2-3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း.
🇺🇸ယူနိုက်တက်စတိတ်: ယူအက်စ်အေသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူမည် 3-6 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း.
🇩🇪ဂျာမနီ 2-3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း. 🇫🇷ပြင်သစ် - 2-3 စီးပွားရေးရက်။
🇪🇸စပိန်၊ 2-3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း. အီတလီအီတလီ 2-3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း.
🇳🇱နယ်သာလန် - နောက်နေ့ဖြန့်ဝေ။ 🇧🇪ဘယ်လ်ဂျီယံ 1-2 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း.
🇪🇺ဥရောပ၊ အနောက်မြောက်နှင့်မြောက် - 2-3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း။ အရှေ့နှင့်တောင်: 3-5 ရက်ပတ်လုံး.
🌐 ကြွင်းသောကမ္ဘာ၏ ~ ၅ ရက်မှ ၁၂ ရက်; တိုင်းပြည်အသေးစိတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေဂျင်စီများနှင့်အတူအပြည့်အဝသေချာရေကြောင်း။ အီးယူအပြင်ဘက်တွင်၊ သွင်းကုန်ခွန်များသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ shipping ပေါ်လစီ။
✅ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းငွေ / ပြန်ပေးငွေ
သင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရက် ၁၀၀ အတွင်းပြန်ပို့နိုင်သည်။ ငွေပြန်အမ်းလျှင်ရလိမ့်မည်။ ယူကေနှင့်အီးယူအမှာစာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ပြန်ပို့ခြင်းတံဆိပ်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၀ ရက်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
✅ကိုယ်ပိုင်ပံ့ပိုးမှုသည်တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ဖြစ်သည်
Daily အွန်လိုင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ် ၀၉း၀၀ မှ ၂၁ နာရီ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်။
"ဒီရတနာရဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကျောက်မျက်ရတနာရဲ့အရောင်ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒီဟာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်၊ ဒါကလည်းမျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အရာပဲ"
- ဂျိုဝဲလ်၊ ဂျာမနီ
"အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှု၊ လှပသောလက်စွပ်နှင့်ယူကေသို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်အလွန်အကြံပေးလိုပါသည်။ "
- ဒံယေလ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
"နားကပ်ကိုကျွန်တော့်ဇနီးအတွက်လက်ဆောင်ရပြီ။ လှပတဲ့ထုတ်ကုန်၊ အမြန်ပို့ဆောင်မှုနဲ့ ၀ ယ်သူတွေကို ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းတယ်။ ဒီ ၀ ယ်တာကိုအရမ်းသဘောကျတယ်!"
- ဘင်, နယ်သာလန်
- Mahela, ဂျာမနီ
ငါမှာကြားခဲ့တဲ့ပုတီးလုံးကအရမ်းလှတယ်။ သူတို့ကိုချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့ကသစ်သားသေတ္တာထဲကိုအံ့သြလောက်အောင်ပတ်ထားတယ်။ "
"လက်စွပ်ကအံကိုက်ကြိုက်တယ်။ ပုံသဏ္,ာန်၊ အရောင်၊ ဒီဇိုင်းကိုငါသဘောကျတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံး။ ငါချီးမွမ်းချက်များစွာရပြီးသား။ "
- Hanna အစ္စရေး
"လှပသောရတနာ, ကောင်းမွန်စွာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ :-) "
- ဆီမွန်၊ နယ်သာလန်
description: ဤ Lovely Cushion Cut Topaz Necklace သည်ဘရာဇီးမှ ၁.၉ ကာရက်ရှိ Real Topaz ကိုသယ်ဆောင်သည်။ Sky Blue Topaz သည် 1.9% Pure Silver ဆွဲကြိုးတပ်ဆင်ထားပြီး Diamond Simulants လေးခုပါ ၀ င်သည်။ လည်ဆွဲမှာ ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဖြစ်သည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ရတနာပစ္စည်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသည်။ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်ပွတ်သစ်သား၏ဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
အစိမ်းရောင်အပြာရောင် Topaz: ဒီကျောက်မျက်ရတနာသည်ဘရာဇီးမှသဘာဝအရင်းအမြစ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်သော Topaz ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသဘာဝအရည်အသွေး Topaz အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လှပသောကျောက်မျက်ရတနာသည်၎င်း၏ခိုင်မာသောမာကျောမှု၊ စင်ကြယ်သောအပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့မှု၊
ဒီဇိုင်းကောင်း ဒီလှပသောအမျိုးသမီးလက်ဝတ်ရတနာအပိုင်းအစကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထွင်းထုထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေရောင် ၉၂၅ ဒေါ်လာနှင့်ငွေတောက်ပသောငွေသည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤကျောက်မျက်ရတနာများသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်များ၊ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဒီအမျိုးသမီးရတနာအပိုင်းအစရှိကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းကင်း၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးသဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များကိုမပြည့်စုံနိုင်ပါ။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် ကြော့ Topaz လည်ဆွဲ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
ဤ Topaz သည်ကျောက်မှတူးဖော်ရရှိသောတကယ့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အားလုံး Topaz ကျောက်မျက်ရတနာ Pure Gems တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများသည်ဘရာဇီးမှရီးရဲလ်၊ သဘာဝ၊ ချွတ်ယွင်းချက်နှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးတို့ဖြစ်သည်။
Topaz သည်ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက် Mohs ၏မာကျောမှုအတိုင်းအတာတွင် ၁၀ အနက်အနက် ၈ ခုတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောကျောက်မျက်ရတနာများအနက်အခက်ခဲဆုံးနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
Natural Topaz သည်ကျောက်တုံးများထဲတွင်ကျောက်သလင်းကျောက်ကဲ့သို့သောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ်ကြီးထွားလာသည်။ ဥပမာ rhyolite, granite သို့မဟုတ် pegmatite ။ ၎င်းသည်ချော်ရည်စီးဆင်းမှုများသို့မဟုတ်ကျောက်အအေးလွန်အဆင့်များ၌လည်းကြီးထွားလာသည်။
သဘာဝ Topaz ကိုကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘရာဇီးလ်သည်ယနေ့ခေတ်အရည်အသွေးမြင့် Topaz ၏အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်အားလုံး Topaz ကျောက်မျက်ရတနာ ဘရာဇီးမှဆင်းသက်လာသည်။
Topaz သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ္တုတွင်းကိုမြေကြီးမှထိရောက်စွာထုတ်ယူရန်အတွက်လေးလံသောစက်ကိရိယာများနှင့်စက်ကြီးများကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်တူးဖော်ခြင်းဖြင့်တူးပါသည်။ ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ၊ ဆွဲပြားများသို့မဟုတ်ရေအမြောက်များကိုတူးဖော်ရရှိသောကျောက်မျက်ရတနာများမှဖုန်နှင့်ရွှံ့စေးများကိုဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသည်။ ယခုသတ္တုတွင်းတူးစင်သန့်ရှင်းသော Topaz သည်အဖြူသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရောင်ရှိသည်။
သဘာဝအပြာရောင် Topaz သည်အလွန်ရှားပါးသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအပြာရောင် Topaz ရရှိနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်သဘာဝသတ္တုတွင်းကျောက်မျက်ရတနာသည်၎င်း၏သဘာဝအရောင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသည်။
ယခင်ကအလွန်အပြာရောင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော Topaz သည်ယခု Sky Blue ဖြစ်သည်။ အားကောင်းသောအပူဖြင့်နောက်ဆက်တွဲ Topaz ၏အပြာရောင်အရောင်သည်တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ အအေးလွန်ကဲသောကာလသည်ဖြစ်ပေါ်လာသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုပျက်စီးစေပြီး Gemstone ကိုဝတ်ဆင်ရန်လုံခြုံစေသည်။
ယနေ့ရောင်းလိုက်သည့်အပြာရောင် Topaz အားလုံးနီးပါးသည်၎င်း၏ထူးခြားသောသဘာဝအရောင်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်ရောင်ခြည်နှင့်အပူပေးခဲ့သည်။ ၄ င်း၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Sky Blue အရောင်ကြောင့် Natural Topaz သည်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုအလွန်နှစ်သက်သည် Topaz လက်ဝတ်ရတနာ.
description: ဤအပြာရောင်နီလာလည်ဆွဲသည်သင်အားချစ်မြတ်နိုးပြီးတန်ဖိုးထားလေးစားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ The Real Blue 0.6ct Sapphire နှလုံးပုံသဏ္inာန်မှာဆွစ်ဇာလန်မှဖြစ်ပြီး ၉၂.၅% Pure Silver တွင်ထည့်ထားသော Diamond Simulants ၁၈ ခုဖြင့်ဝိုင်းထားသည်။ Necklace တွင်ပြသထားသည့် 18cm ဒဏ်ငွေငွေကွင်းရှိသည်။
စစ်မှန်သော Sapphire: ဒီအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှစစ်မှန်သောအပြာရောင် Sapphire ဖြစ်ပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့် optical အလှကုန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှထုတ်လုပ်သော Sapphire သည်တူညီသောဒြပ်စင်များနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအပူနှင့်ဖိအားသည်ကျောက်မျက်ရတနာမှထုတ်လုပ်သောသဘာဝ Sapphire နှင့်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီသော်လည်းအညစ်အကြေးမှကင်းလွတ်သည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီ Sapphire နှလုံးလည်ဆွဲကိုရယူရန်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
ဒီ Sapphire လက်ဝတ်ရတနာကို Sapphire ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤလှပသောအပြာရောင် Sapphire သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဆွစ်ဇလန်မှ ၁၀၀% စစ်မှန်သောဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်ထားသောရီးရဲလ် Sapphire ဖြစ်သည်။
အားလုံး နီလာကျောက်မျက်ရတနာ Pure Gems မှဤဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်ထားသောရီးရဲလ် Sapphires များပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Sapphires များသည်အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရောင်အသွေး၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာမှ Sapphire လက်ဝတ်ရတနာများသည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်အပြင်သဘာဝ Sapphire လက်ဝတ်ရတနာများထက်စျေးနှုန်းသက်သာပြီး ၁၀၀% ပconflictိပက္ခများကင်းစင်သည်။
အစစ်အမှန်အပြာရောင် Sapphires အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်; သဘာဝ Sapphires နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှစိုက်ပျိုး Sapphires ။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သည့် Sapphire သည်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီပြီးကျောက်မှထုတ်ယူရရှိသော Sapphire ဖြစ်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးမှာ ၁၀၀% အစစ်အမှန် Sapphire ဖြစ်သည်။
သဘာဝ Sapphire ကိုဇင်ဘာဘွေ၊ ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှတူးဖော်ရရှိသည်။ ဤသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင်ပprocessိပက္ခများ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများနှင့်ကလေးအလုပ်သမားများပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့လုပ်တယ် မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ရတနာများကိုသာဝယ်ယူပြီးမှသာဤ Sapphires များကိုအသုံးပြုပါ။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိ Sapphires များသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးကာရက်လျှင်ယူရို ၁၀.၀၀၀ နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။ သဘာဝ Sapphires အားလုံးနီးပါးသည်အညစ်အကြေးများ၊ ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းနှင့်အရောင်မှေးမှိန်ခြင်းများရှိသည်။ ဒါကငါတို့လုပ်ရသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် မဟုတ် မည်သည့်သဘာဝ Sapphires ကိုသုံးပါ။
ငါတို့သုံးတယ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဓာတ်ခွဲခန်းမှ Sapphires များ။ ဤဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သော Sapphires များသည်ကြည်လင်သောအပြာရောင် Sapphires များဖြစ်သည်။ ဤစစ်မှန်သောနီလာများသည်ပconflictိပက္ခကင်း။ အညစ်အကြေးများကင်းစင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သော Sapphires များသည်လည်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊
Sapphire သည် Ruby နှင့်တူညီသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်က၎င်း၏အရောင်ဖြစ်ခြင်း။ Sapphire ဟူသောအမည်ကိုလက်တင်နီလာ၊ ဂရိ sappheiros (σαπφειρος) နှင့် Hebrew sappir (סַפִּיר) မှဆင်းသက်လာသည်။ ဤရှေးဟောင်းစကားလုံးများအားလုံးရိုးရှင်းသောဆိုလိုသည်မှာအပြာရောင်။
Sapphire သည်အဓိကအားဖြင့် Corundum ပါဝင်သည်။ Corundum ဒြပ်စင်သည် aluminium oxide ဖြစ်သည်။Al2O3) crystal form မှာ။ Sapphire ၏အပြာရောင်သည်သံ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ခရိုမီယမ်၊ ကြေးနီ၊
Sapphire ကို ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Auguste Verneuil မှတီထွင်ခဲ့သော flame fusion နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စိုက်ပျိုးသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် Sapphire ကိုသဘာဝတွင်မည်သို့ဖန်တီးသည်ကိုအတုခိုးသည်။ Sapphire ကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဓာတုဒြပ်စင်များမှန်ကန်စွာပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန်အလွန်ပူပြင်းသည့်အပူလိုအပ်သည်။
၎င်းနည်းလမ်းသည်ခရိုမီယမ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များနှင့်ရောနှောထားသော alumina ဒြပ်စင်၏ ၁၀၀% စင်ကြယ်သောအမှုန့်ပုံစံလိုအပ်သည်။ Sapphire ကိုဖန်တီးရန်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောမီးဖို၌အပူချိန်အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အပူပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဒြပ်စင်များ၏အပူသည်ဒြပ်စင်များအရည်ပျော်သွားသည်အထိရှုပ်ထွေးသောလောင်ကျွမ်းမှု (ပေါက်ကွဲမှု) နှင့်ပတ်သက်သောရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ အရည်ပျော်သောဒြပ်စင်များသည်မီးဖိုကိုသေးငယ်သောအစက်များဖြင့်ချန်ထားကာခဲယဉ်းပြီးကျောက်တုံးကျောက်ခဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာသည်အရည်အသွေးမြင့်စစ်မှန်သောစင်ကြယ်သော Sapphire ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် Sapphire သည် Sapphire ကျောက်မျက်ရတနာများထဲသို့ဖြတ်ကူးခံရသည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြောင့်ဤနီလာများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသည်။ အသုံးပြုသောဒြပ်စင်များစုံလင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနက်ရှိုင်းသောအပြာအရောင်ကိုပြသသည်။ Sapphires များသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့၏သို့မ ၀ င်မီကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာရှင်များကအလွန်ကောင်းမွန်သောကျောက်မျက်ရတနာများဖြတ်တောက်ခြင်းသို့ထွင်းထုထားသည် နီလာကျောက်မျက်ရတနာ.
description: ဒီလက်ရာမြောက်သော Brilliant White Gem Necklace သည်စိန်ပွင့်တစ်ပွင့်နှင့်အတူဆွဲအား ၁၀၀ ကာရက်ရှိစိန်ပွတ်တိုက်နှင့်အတူဆွဲဆောင်ထားသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဆက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကျောက်မျက်: ဤ Simulated Diamond သည်သဘာဝစိန်များ၏အမြင်အရည်အသွေးကို ကျော်လွန်၍ 4C ၏စကြဝuniversalာအဆင့်တိုင်း၏အရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖြတ်နှင့်ကာရက်၊ ၎င်း၏အရောင်သည် D အရောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးရှိပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် VVS ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များနှင့်မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် ကြော့ကျောက်မျက်ရတနာ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
ဒီလက်ဝတ်ရတနာကို Diamond Simulants ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စိန်ပွင့်တစ်ပွင့်သည်ဓာတ်ခွဲခန်းမှဖန်တီးသောကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရရှိနိုင်သည့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရရှိသည့်စိန်များ၏အမြင်အာရုံကိုလှပစွာဆင်တူသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ စိန် Simulants အရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖြတ်နှင့်ကာရက်စသည့်သဘာဝအဆင့်စိန်များ၏အမြင်အာရုံအရည်အသွေးထက်သာလွန်သည်။ ကျောက်မှထုတ်ယူသောသဘာဝစိန်များနှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ပွင့်များသည်ဓာတ်ခွဲခန်းမှပြုလုပ်သောကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။ သဘာဝမစုံလင်မှု၊ ပconflictိပက္ခနှင့်မည်သည့်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုမှကင်းသည်။
မည်သည့်စိန်မဆို၏အရည်အသွေးကိုတိုင်းတာရန် universal နည်းလမ်းသည် GIA မှ4C's grading method ဖြစ်သည်။4C ၏အရောင်၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကာရက်အတွက်ရပ်တည်ခြင်း။ အမှီအခိုကင်းသော4C နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Diamond Simulants ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးသည်ရှုထောင့်တိုင်းပေါ်ရှိသဘာဝစိန်ထက်သာလွန်ကြောင်းသက်သေပြသည်။
သဘာဝစိန်အများစုသည်သဘာဝမစုံလင်မှုများကြောင့်အရောင်အချို့ရှိကြသည်။ စိန်တစ်ပွင့်တိုးလေလေ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်စျေးနှုန်းမြင့်လေလေဖြစ်သည်။ သန့်စင်သောကျောက်မျက်ရတနာများမှ Diamond Simulants အားလုံးသည် ၁၀၀% စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သောအရောင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ D colorless ။
Natural Diamond ၏သဘာဝဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အမြဲတမ်းအားနည်းချက်များ / မစုံလင်မှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏တောက်ပမှုနှင့်လှပမှုသည်အားနည်းနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝတ်ရတနာ၏ Diamond Simulants များသည်အလွန်ရှင်းလင်းပြီးလှပသည်။ အနီး - စုံလင်ခြင်းအဘို့အဖန်တီးခဲ့တယ်။ အလွန်နည်းပါးစွာထည့်သွင်းထားသော (VVS) သဘာဝစိန်များသည်အလွန်ရှားပါးပြီးစျေးကြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ Diamond Simulants အားလုံးသည်အမြင့်ဆုံး VVS Clarity ရှိသည်။
အထူးပုံသဏ္intoာန်အရဖြတ်တောက်ခြင်း၏အရည်အသွေးသည်စိန်၏ထောင့်များ၊ အချိုးအစားများ၊ အချိုးကျရှုထောင့်နှင့်အပြီးသတ်အသေးစိတ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဖြတ်တောက်မှုရှိသည့်စိန်တစ်ပွင့်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသည်။
၁.၀ ကာရက်ရှိသဘာဝစိန်တစ်လုံး၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသည်အကြားတည်ရှိသည် €5.000 နှင့် €10.000 ။ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာ ၂.၀ ကာရက်ရှိသဘာဝစိန်တစ်လုံး၏တန်ဖိုးဖြစ်သည် €10.000 နှင့် €20.000 ။
Pure Gems ကမ်းလှမ်းသော Diamond Simulants များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ၎င်းတို့အနက်အများစုသည် ၁.၀ ကာရက် (သို့) ပိုကြီးပြီးသဘာ ၀ စိန်၏တန်ဖိုးအနည်းငယ်မျှသာကုန်ကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Diamond Simulants သည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးအကြမ်းခံနိုင်ပြီး Mohs Scale of 8 မှ ၁၀ ခုအနက်မှ ၈-၉ အထိရှိသည်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Diamond Simulants သည်သဘာဝကျောက်မျက်ရတနာများထက်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။
အားလုံးစိန် Simulant လက်ဝတ်ရတနာ by Pure Gems သည်အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်အမြင်အာရုံအလှအပကိုရရှိနိုင်သောဤစိန်ပွင့်များပါဝင်သည် စိန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး တည်းသာထိုနှစ်ခုကြားရှိခြားနားချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Diamond Simulants သည်သူတို့၏အရည်အသွေးကောင်းအပြင်သဘာဝစိန်များနှင့် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသောပစ္စည်းများထက်များစွာပိုမိုတတ်နိုင်သည်။
description: Emerald Chain တွင်တော်ဝင်ဒီဇိုင်းရှိပြီးမင်းအားချမ်းသာသည်ဟုခံစားရစေသည်။ ၎င်းသည်ရုရှားမှ ၀.၆ ကာတာပုလဲခတ်အရည်အသွေးမြင့်မားသော Simulated မြနှင့် ၂၂ Simulated စိန်များရှိသည်။ Finely Crafted ကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၉၂.၅% Pure Silver Design Pendant တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြကွင်းသည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထူးချွန်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည့်ရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏အရည်အသွေးမြင့်တင်ထားသောမြမြစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမြလည်ဆွဲလက်ဝတ်ရတနာအပိုင်းအစသည်သန့်စင်ပြီးအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကျောက်မျက်: ဒီအရည်အသွေးမြင့် Simulated Emerald သည်စကြဝ'sာ၏ 4C ၏အဆင့်တိုင်းအတွက်အရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကာရက်၊ နက်ရှိုင်းသောအစိမ်းရောင်အရောင်သည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် VVS ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဖြတ်တောက်မှုရလဒ်သည်မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသော Emerald Chain Necklace ကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤကျောက်မျက်ရတနာများသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်များ၊ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဤ Emerald လည်ဆွဲရတနာရှိကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခမရှိ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရရှိခြင်းနှင့်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုမကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါ။ သင်၏ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲကိုခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီမြချည်သံကိုမှာပါ ယနေ့နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သင်္ဘောရ! သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာ၌သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်! You သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ အတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအချက်အလက်များ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Delivery, Returns & Support tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလှပမြမြအစိမ်းရောင်လည်ဆွဲကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့၊ 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီမြလက်ဝတ်ရတနာကို Emerald Simulant ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Emerald Simulant ဆိုသည်မှာဓာတ်ခွဲခန်းမှဖန်တီးထားသောကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောမြကျောက်များ၏အမြင်အာရုံကိုလှပစွာဆင်တူသည်။
မြ simulants အထူးသဖြင့်လက်ဝတ်ရတနာအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးများသည်မြကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြများတွင်လှပသောနက်မြမြအစိမ်းရောင်အရောင်၊ မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုညွှန်းကိန်း၊ ပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္heာန်၊ ဆstructure္ဌဂံဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ၆.၅-၇.၀ ၏မာကျောမှုအတိုင်းအတာသည်အလွန်မာကျောသည်။
ကျောက်များမှတူးဖော်ရရှိသောသဘာဝမြများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏မြများထုတ်လွှတ်သည့်ဓာတ်ခွဲခန်းများသည်ဓာတ်ခွဲခန်းမှပြုလုပ်သောကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။ သဘာဝမစုံလင်မှု၊ ပconflictိပက္ခနှင့်မည်သည့်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုမှကင်းသည်။
Pure Gems မှအသုံးပြုသောဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီးမြများ simulants အားလုံးသည်ထိပ်ဆုံး ၁၀% မှကျောက်မျက်ရတနာများ၏အကောင်းဆုံး AAA ပရီမီယံအရည်အသွေးမြများကိုတုပသည့်အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီးကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့တွင်အနည်းငယ်စီပါ ၀ င်မှုများရှိပြီးအစိမ်းရောင်ကြွယ်ဝသော၊ ၎င်းသည် Pure Gems ကိုဖြစ်စေသည် မြရတနာ လှပပြီးကြာရှည်
Emerald ကဲ့သို့သောမည်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာ၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းလမ်းမှာ GIA မှ ၄ C စီအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။4C ၏အရောင်၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကာရက်အတွက်ရပ်တည်ခြင်း။ အမှီအခိုကင်းသော4C နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီးသောမြ simulants ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုသက်သေပြသည်။ ကျနော်တို့ကမြအရောင်နဲ့စတင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီးမြမြ simulants အားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသောမြအရောင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Pure Green အရောင်ကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေထားသည်။ ၎င်း၏အရောင်သေံသည်မလွန်းပါ၊ မမှောင်ပါ။ ကျောက်မျက်ရတနာများသည်အရောင်ဖျော့ဖျော့နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမြင့်မားသည်။
၉၉% သောသဘာဝမြမြများတွင် ၄ င်းတို့၏သဘာဝဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် (အားနည်းချက်များ / မစုံလင်မှုများ) ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက် ၀ တ်ရတနာများမြမြပုံစံသည်အလွန်ရှင်းလင်းပြီးလှပသည်။ အနီး - စုံလင်ခြင်းအဘို့အဖန်တီးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်စိန်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတိုင်းအတာအနေဖြင့် IF သို့မဟုတ် VVS နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးမြ (အမျိုးအစား) အမျိုးအစား (အနီး) တွင်ထည့်သွင်းထားသောအခမဲ့ကျောက်မျက်များထဲတွင်ပါဝင်သည်။
ပုံသဏ္intoာန်တစ်ခုသို့ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အရည်အသွေးသည်မြ၏ထောင့်၊ အချိုးအစား၊ အချိုးကျရှုထောင့်နှင့်အပြီးသတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Emerald Simulants များကိုကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာရှင်ကအနီးကပ်ဆုံးပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သူတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးမြပုံစံများအဖြစ်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။ သူတို့ဟာတောက်ပပြီးရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မြ simulant များတွင် 0.7ct မှ 5ct နှင့်အထက်အထိကြီးမားသော carat အရွယ်အစားရှိသည်။ အကယ်၍ ဤတူညီသောကာရက်ကျောက်မျက်များကိုအရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်တူညီသောသဘာဝမြကိုတူးဖော်ခဲ့ပါကသူတို့သည်ကျောက်မျက်တစ်လုံးလျှင်ယူရိုထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
အားလုံး မြ Simulant လက်ဝတ်ရတနာ သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဤထူးခြားသောပုံရိပ်သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့် optical အလှအပများဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကသာထိုနှစ်ခုကြားရှိခြားနားချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်အရည်အသွေးအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြ simulants များသည်သဘာဝမြများနှင့် ၁၀၀% ပfreeိပက္ခကင်းသောပစ္စည်းများထက်များစွာပိုမိုတတ်နိုင်သည်။
description: မင်းကမင်းသမီးလေးလိုခံစားစေဖို့ဒီ Citrine ဆွဲကြိုးဆွဲကြိုးကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Citrine လည်ဆွဲအားဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသမီး Diana နှင့် Princess Kate တို့ကလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီအံ့သြဖွယ် 1.8ct ဘဲဥပုံဖြတ် Citrine Yellow Gemstone နှင့်ဘရာဇီးမှ Simulated စိန် ၁၄ လုံးကို ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတူသောငွေရောင်ကွင်းဆက်ပါရှိသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Citrine Pendant Necklace သည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲစွာဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသောရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏အဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ရီးရဲလ် Citrine: ဒီအဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာသည်ဘရာဇီးမှသဘာဝသဲတူးဖော်သည့် Citrine၊ သဘာဝ Citrine သည်သဘာဝတွင်ရှားပါးသောကြောင့်မကြာခဏတုပ။ အရောင်တောက်ပသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော Citrine သည်စစ်မှန်သောကုသမှုမရှိသောသဘာဝအစစ်အမှန် citrine ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသော citrine pendant လည်ဆွဲကိုအထူးသီးသန့်ဖြစ်စေသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဒီကြော့ Citrine Pendant Necklace ကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီကားများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ စင်ကြယ်သောအဖြူရောင်ဒဏ်ငွေဖြစ်သော 925 Sterling Silver သည်အလွန်မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ဤ Silver Citrine Necklace အတွက်အဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤ Citrine အဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်၎င်းသည် ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားသန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း၊ ဤအဝါရောင် Citrine ဆွဲကြိုးရှိကျောက်မျက်သည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးသဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုမကုန်ခမ်းနိုင်ပါ။ သင်၏ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်သင်၏အဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲကိုခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီ Citrine ဆွဲကြိုးလည်ဆွဲမှာယူပါ ယနေ့နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာတစ်ခွင်သင်္ဘောကိုလက်ခံရရှိ! Pure Gems တွင်သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်နိုင်သည်။ You သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ အတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအချက်အလက်များ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Delivery, Returns & Support tab ကိုနှိပ်ပါ။ လက်လွတ်မရဤလှပသော Citrine လည်ဆွဲမရပါ; 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။
အဝါရောင်ကျောက်မျက်: သဘာဝအဝါရောင် Citrine ကျောက်မျက်
Citrine သည်ကျောက်မှထုတ်ယူသောသဘာဝအဝါရောင်ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ Pure Gems တွင်ရောင်းချသော Citrine လက် ၀ တ်ရတနာများတွင်ဘရာဇီးလ်မှရီးရဲလ်၊ သဘာဝနှင့်အရည်အသွေးမြင့် Citrine ကျောက်မျက်များရှိသည်။
သဘာဝ Citrine သည်အလွန်ရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မကြာခဏအတုနေကြသည်။ Citrines အဖြစ်ရောင်းချသောကျောက်မျက်ရတနာအများစုသည်အမှန်တကယ်အပူဖြင့်ကုသသော Amethysts များဖြစ်ပြီး၊ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော Citrine နှင့်တူရန်အရောင်အစိတ်အပိုင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အဝါရောင်ကျောက်မျက်: အဝါရောင် Citrine ၏အံ့သြဖွယ်အရောင်
ကျောက်မှထုတ်ယူထားသောစစ်မှန်သော Citrine သည်အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိပြီးအဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏အရောင်သည်အပူဖြင့်ကုသသောပစ္စည်းများထက်အညိုရောင် - အညိုရောင်မှအနီ - အညိုရောင်သို့သွားသည်။ အားလုံးသောစင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ရတနာများ Citrine ကျောက်မျက်ရတနာများသည်သဘာဝ၊ စစ်မှန်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းမခံရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာအားလုံးကိုဖြစ်စေသည် Citrine လက်ဝတ်ရတနာ အလွန်သီးသန့်။
သဘာဝ Citrine သည်၎င်း၏ရွှေရောင်ကိုအိုင်းယွန်းများမှရရှိသည်။ အရောင်လည်း Gemstone မှ၎င်းလက်တင်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည်။citrina "အဝါရောင်" နှင့် "lemon" အတွက်ပြင်သစ်စကားလုံးကိုဆိုလိုသည်။
Citrine ကျောက်မျက်: သဘာဝ Citrine ကျောက်မျက်၏မူလအစ
သဘာဝ Citrine များသည်ကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံးများအတွင်းကျောက်သလင်းကျောက်သတ္တုအဖြစ်ကြီးထွားပြီးအဓိကအားဖြင့် magmeg pegmatites တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သဘာဝ Citrine ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တွေ့ရှိရပြီးယနေ့အချိန်တွင်ဘရာဇီးသည် Citrine ကျောက်မျက်ရတနာများကိုအကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်နှင့်ကုန်ကြမ်းပေးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်အားလုံး Citrine ကျောက်မျက်ရတနာများသည်ဘရာဇီးမှဖြစ်သည်။
ရွှေစင်အရောင်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတို့ကြောင့်သဘာဝ Citrine သည် Exeptional ကိုပြုလုပ်သည် Citrine လက်ဝတ်ရတနာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ဝတ်ဆင်ရန်။
description: ဤထူးခြားသောမြအစိမ်းရောင်လည်ဆွဲသည်ရုရှားနိုင်ငံမှထူးခြားသောအရည်အသွေးမြင့် 1.8ct Cushion Cut Simulated Emerald ကိုသယ်ဆောင်သည်။ Emerald Simulant သည် ၉၂.၅% Pure Silver ဆွဲကြိုးတပ်ဆင်ထားပြီး ၃၂ Simulated Diamonds နှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ မြလည်ဆွဲနှင့် ၄၅ စင်တီမီတာရှည်သောငွေကွင်းရှိသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Emerald Green Necklace သည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသည်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည့်ရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏အရည်အသွေးမြင့်တင်ထားသောမြမြစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမြလည်ဆွဲလက်ဝတ်ရတနာအပိုင်းအစသည်သန့်စင်ပြီးအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသော Emerald Green Necklace ကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤကျောက်မျက်ရတနာများသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်များ၊ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဤ Emerald လည်ဆွဲရတနာရှိကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခမရှိ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရရှိခြင်းနှင့်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုမကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါ။ သင်၏ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်သင်၏မြစိမ်းရောင်လည်ဆွဲကိုခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီမြစိမ်းရောင်လည်ဆွဲကိုမှာထားပါ ယနေ့နှင့် et Free Worldwide မှသင်္ဘော! သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာ၌သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်! You သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ အတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအချက်အလက်များ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Delivery, Returns & Support tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလှပမြမြအစိမ်းရောင်လည်ဆွဲကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့၊ 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။
description: အပြာနုရောင် Topaz လည်ဆွဲသည်မင်းသမီးလေးကဲ့သို့ခံစားရစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုမင်းသမီးဒိုင်ယာနာနှင့်မင်းသမီးကိတ်ကဲ့သို့သောဗြိတိန်တော်ဝင်ရတနာတော်ဝင်များ၏ရတနာများကလှုံ့ဆော်သည်။ ဘရာဇီးလ်မှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအပြာရောင် 2.3ct Oval Cut Topaz နှင့် Diamond Simulants ၁၄ ခုသည် ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဆက်ဖြင့်ပြသထားသည်။
description: ဒီကြွယ်ဝသော multicolor ပုလဲလည်ဆွဲသည်ရီးရဲလ် ၇၅ လုံးအထိရှိသည်။ ၇-၉ မီလီမီတာအရွယ်စုံအရောင်စုံပုလဲများကိုခိုင်ခံ့သောကြိုးဖြင့်ကိုင်ထားသည်။ ဒီလှပသောပုလဲများ၏ဘဲဥပုံ၊ တောက်ပမှုနှင့်အရောင်အားလုံးသည်သဘာဝဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့သော: ဤပုလဲတိုင်းလမ်းအတွက်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ပါ၏ အရောင်၊ တောက်ပမှုနှင့်မျက်နှာပြင်များအပြင်၎င်းတို့သည် ၁၀၀ ရာနှုန်းအရအရသန့်ရှင်းသည်။ ဤအမျိုးသမီးလက်ဝတ်ရတနာအပိုင်းအစမှပုလဲများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခများ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများ၊ ကလေးအလုပ်သမားများကင်းမဲ့ခြင်း၊
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ ယခုပန်းရောင်သဘာဝပုလဲနားကပ်များကိုယခုရရှိရန်မှာယူပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်လာသည့်ကာလ။ "ယခုဝယ်ယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဒီ Brilliant Round Gems Necklace ဟာစိန်ပွင့်တစ်ပွင့် ၂၀ ပါ ၀ င်တဲ့အလယ်အလတ်မှာ ၁.၀၀ ကာရတ် Brilliant ဖြတ်ထားသော Diamond Simulant နှင့်အတူတောက်ပသောဆွဲကြိုးတစ်ခုရှိသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။ ဤကြေညာချက်အပိုင်းအစအခါသမယများအတွက်သင့်လျော်သည်။
description: ဒီ Exquisite Brilliant Cut Topaz Necklace သည်ဘရာဇီးလ်မှစုံလင်လှသော ၁.၇ ကာရက်တကယ့်သဘာဝ Topaz ကိုသယ်ဆောင်ထားတယ်။ Topaz ကို ၉၂.၅% Pure Silver ဆွဲကြိုးတပ်ဆင်ထားပြီးအပြာကျောက်တုံးငယ်များနှင့်ထိပ်တိုက်အလှဆင်ထားသည့် Diamond Simulants ဝိုင်းရံထားသည်။ လည်ဆွဲမှာ ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းနှင့်အတူကျောက်မျက်ရတနာ ၃၇ လုံးပါ ၀ င်သည်။
description: ဤထူးခြားသောပတ္တမြားလည်ဆွဲသည် ၁.၅ ကာရက်ရှိသောပုလဲပတ္တမြားကို၎င်း၏အဓိကကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ်ရရှိထားသည်။ Ruby ကို ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ Diamond Diamond Simulator ပေါင်း ၅၃ ခုဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ဒီလည်ဆွဲရဲ့ပုံသဏ္andာန်နဲ့ဒီဇိုင်းကသင့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းစေမှာပါ။
ရီးရဲလ်ပတ္တမြား: ဤကျောက်မျက်သည်ပတ္တမြားနီစစ်ဖြစ်၏။ ပတ္တမြားကိုအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် (Al) အပူပေးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်2O3) နှင့်မြင့်မားသောဖိအားအောက်မှာ 2000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှခရိုမီယမ်; သဘာဝတွင်သာမကဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းမှာပတ္တမြားကြီးစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာ ၁၀၀% ရီးရဲလ်အရည်အသွေးရှိတဲ့ပတ္တမြားဖြစ်တယ်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် ကြော့ပတ္တမြားလည်ဆွဲ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
ဒီပတ္တမြားရတနာများကိုရီးရဲလ်ပတ္တမြားနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤလှပသောအနီရောင်ပတ္တမြားသည် ၁၀၀% အစစ်အမှန်ဓာတ်ခွဲခန်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်အလွန်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ရူပဗျာဖြစ်သည်။
အားလုံး ပတ္တမြားရတနာ Pure Gems မှဤဓာတ်ခွဲခန်းမှထွက်ရှိသောရူပဗေဒဆိုင်ရာရူဘီများပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ္တမြားများသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကာရက်တို့ဖြင့်အကောင်းဆုံးအလှအပများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာမှပတ္တမြားလက်ဝတ်ရတနာများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်အပြင်သဘာဝပတ္တမြားလက်ဝတ်ရတနာများထက်စျေးနှုန်းသက်သာပြီး ၁၀၀% ပconflictိပက္ခများကင်းစင်ပါသည်။
နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ရီးရဲလ်ပတ္တမြား; သဘာဝပတ္တမြားနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှပေါက်ဖွားသောပတ္တမြား။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှရသောပတ္တမြားသည်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီပြီးကျောက်မှထုတ်ယူသောသဘာဝရူဘီနှင့်တူသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် ၁၀၀% အစစ်အမှန်ပတ္တမြားဖြစ်ပြီးတူညီသောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
သဘာဝပတ္တမြားကိုအာဖဂန်နစ်စတန်၊ မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာတို့တွင်တွေ့ရသည်။ ဤသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင်ပprocessိပက္ခများ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများနှင့်ကလေးအလုပ်သမားများပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့လုပ်တယ် မဟုတ် ဒီပတ္တမြားကိုသာအသုံးပြုပါ။ Pure Gems ကိုသာပေးပါတယ်။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသောသဘာဝပတ္တမြားများမှာအလွန်စျေးကြီးပြီးကာရက်လျှင်ယူရို ၁၀.၀၀၀ အထိကျသင့်သည်။ သဘာဝပတ္တမြားအားလုံးနီးပါးသည်အညစ်အကြေးများ၊ ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းနှင့်အရောင်မှေးမှိန်ခြင်းများရှိသည်။ ဒါကငါတို့လုပ်ရသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် မဟုတ် မည်သည့်သဘာဝပတ္တမြားကိုသုံးပါ။
ငါတို့သုံးတယ် ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သည့်ပတ္တမြား။ ဤဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောပတ္တမြားများသည်အနီရောင်နက်ရှိုင်းသောထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသောပတ္တမြားများဖြစ်သည်။ ပတ္တမြားများသည်ပconflictိပက္ခကင်း။ အညစ်အကြေးမှကင်းလွတ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောပတ္တမြားများကိုလည်းအရောင်မပေး၊
Ruby သည် Sapphire နှင့်တူညီသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်က၎င်း၏အရောင်ဖြစ်ခြင်း။ Ruby ဟူသောအမည်မှာလက်တင်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည် ruber အဓိပ္ပာယ်: အနီရောင်။
ပတ္တမြားတွင်အဓိကအားဖြင့် Corundum ပါဝင်သည်။ Corundum ဒြပ်စင်သည်လူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် (Al2O3) crystal form မှာ။ ပတ္တမြား၏အနီရောင်သည်၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါခရိုမီယမ်ဒြပ်စင်မှလာသည်။
Ruby ကို ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Auguste Verneuil မှတီထွင်ခဲ့သော flame fusion နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စိုက်ပျိုးသည်။ Ruby သည်သဘာဝတွင်မည်သို့ဖန်တီးသည်ကိုထိုဖြစ်စဉ်ကအတုယူသည်။ ပတ္တမြားကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဓာတုဒြပ်စင်များမှန်ကန်စွာပေါင်းစပ်ရန်အလွန်ပူပြင်းသည့်အပူလိုအပ်သည်။
၎င်းနည်းလမ်းသည်ခရိုမီယမ်နှင့်ရောနှောထားသော alumina ဒြပ်စင်များ၏ ၁၀၀% စင်ကြယ်သောအမှုန့်ပုံစံလိုအပ်သည်။ Ruby ကိုဖန်တီးရန်အတွက်အထူးပြုမီးဖို၌အပူချိန်အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အပူပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဒြပ်စင်များ၏အပူသည်ဒြပ်စင်များအရည်ပျော်သွားသည်အထိရှုပ်ထွေးသောလောင်ကျွမ်းမှု (ပေါက်ကွဲမှု) နှင့်ပတ်သက်သောရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ အရည်ပျော်သောဒြပ်စင်များသည်မီးဖိုကိုသေးငယ်သောအရာများဖြင့်ထားကာခဲယဉ်းပြီးကျောက်ခဲကျောက်ခဲနှင့်အတူတကွဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာသည်အရည်အသွေးမြင့်စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသောပတ္တမြားကိုဤသို့ဖန်တီးပုံဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Ruby သည် Ruby ကျောက်မျက်ရတနာများအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်။ ၎င်း၏ပတ္တမြားကြောင့်ဤပတ္တမြားအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှိသည်။ အသုံးပြုသောဒြပ်စင်များစုံလင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနက်ရှိုင်းသောအနီရောင်အရောင်ကိုပြသသည်။ ပတ္တမြားများကိုနောက်ဆုံး၌ငါတို့သို့မထည့်သွင်းမီထူးခြားသောကျောက်မျက်ရတနာများဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ပတ္တမြားရတနာ.
description: ဤရိုးရှင်းသောပုလဲလည်ဆွဲကို ၉-၁၁ မီလီမီတာစစ်မှန်သောရေချိုပုလဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ The Diamond Pendant နှင့်အတူပုလဲလည်ဆွဲ ပုံဖော်ထားသောစိန်များနှင့်ချိတ်ဆွဲထားသည့် ၄၅ စင်တီမီတာ Fine Sterling Silver ကွင်းဆက်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပုလဲသည်ဘဲဥပုံ၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်သဘာဝ Ivory White အရောင်များရှိသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: အဆိုပါ Diamond Pendant နှင့်အတူပုလဲလည်ဆွဲ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ကျော်ကြားသောရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems မှပုလဲရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်; ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသောရိုးရိုးပုလဲလည်ဆွဲကိုအဖြူရောင်တွင်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲ၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ ဒီမှာကြားပါ Diamond Pendant နှင့်အတူပုလဲလည်ဆွဲ လက်ခံရရှိရန်ယခု တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်လာသည့်ကာလ။ "ယခုဝယ်ယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤသိမ်မွေ့သောနီလာလည်ဆွဲသည်ဆွစ်ဇလန်မှအရည်အသွေးမြင့် ၁.၉ ကာရက်ရှိအပြာရောင် Sapphire ကို၎င်း၏ကျောက်တုံးကျောက်ဖြစ်သည်။ ရီးရဲလ် Sapphire သည်ပတ်ပတ်လည်တွင်အပြာရောင်လှည့်ဖျားများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ ၉၂,1.9% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤလည်ဆွဲ၏ Fine Design သည်ကြော့ရှင်းလှပမှုရှိသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် နီလာလည်ဆွဲ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: Green Green Emerald Cut Necklace သည် Gigantic 3.7ct Emerald Simulant ကိုရုရှားမှပိုင်ဆိုင်သည်။ Emerald Simulant ကို Master Emptald Cut ထဲသို့ပြုလုပ်ထားပြီး Diamond Simulants ၂၈ လုံးပါသော ၉၂.၅% Pure Silver Design Pendant တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လည်ဆွဲမှာ ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကျောက်မျက်: ဒီ Simulated Emerald သည် 4C ၏အဆင့်တိုင်းရှုထောင့်တိုင်းသည်သဘာဝမြ၏သွင်ပြင်အရည်အသွေးထက်သာလွန်သည်။ အရောင်၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကာရက်၊ နက်ရှိုင်းသောအစိမ်းရောင်အရောင်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် VVS ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကြောင့်မြင့်မားသောရောင်ခြည်နှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် 3.7ct ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Citrine Stone Necklace သည်သင်၏နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်မှုအတွက်သင့်တော်ပြီးသင့်မျက်နှာကိုချက်ချင်းလင်းစေလိမ့်မည်။ ဘရာဇီးမှ Shimmering Yellow 1.7 carat Oval Cut Natural Citrine ကို ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဆက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏လည်းနိုဝင်ဘာလ Birthstone လည်ဆွဲ။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်အဝါရောင် Citrine Pendant သည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲစွာဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည့်ရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏ Citrine Birthstone Necklaces စုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ citrine ဆွဲကြိုးလည်ဆွဲသည်အဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ရီးရဲလ် Citrine: ဒီအဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာသည်ဘရာဇီးမှသဘာဝသဲတူးဖော်သည့် Citrine၊ သဘာဝ Citrine သည်သဘာဝတွင်ရှားပါးသောကြောင့်မကြာခဏတုပ။ အရောင်တောက်ပသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောအဝါရောင် Citrine သည်စစ်မှန်။ မကုသသောသဘာဝအစစ်အမှန် citrine ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသော citrine ကျောက်မျက်ရတနာလည်ဆွဲကိုအလွန်ထူးခြားစေသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသောငွေ citrine ဆွဲကြိုးလည်ဆွဲကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤအဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်၎င်းသည် ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားသန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း၊ ဤ citrine ကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုမရှိခြင်း၊ ကလေးအလုပ်သမားမလုပ်ရခြင်းနှင့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များကိုမကုန်ခမ်းနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်သင်၏အဝါရောင်ကျောက်မျက်ကြိုးဆွဲကြိုးကိုခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီ Citrine Stone Necklace မှာယူပါ ယနေ့နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာတစ်ခွင်သင်္ဘောကိုလက်ခံရရှိ! Pure Gems တွင်သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်နိုင်သည်။ You သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ အတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအချက်အလက်များ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Delivery, Returns & Support tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလှပတဲ့ Citrine ဆွဲကြိုးကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။